Steel Pipe, Pipe Bofu Flange, nickel chiwanikwa Tube - Houdong
SSAW uye HSAW Steel Pipe
Zononoka Welded Pipe
Chiwanikwa Steel Pipe
Magnesium chiwanikwa Tube
Chiwanikwa Hollow Tube
Titanium chiwanikwa Pipe
muridzo unoridzirwa Welding
Stainless Steel musono Tube mutopota
How kusarudza Stainless simbi flange zvinhu?
Dzinenge unhu pamusoro kupisa kurapwa
Quality anoita misika uye vakatendeseka anoshanda vatengi. Tinogamuchira kuti aripe kushanya kune kambani yedu pamwe uye tose kukura.
The kambani ine vakanyorwa guta mamiriyoni 188 Currencykuva ndokwenguva nzvimbo 108 maeka. Kambani rakavambwa muna 2008. The kambani nhatu Hofisi simbi mutopota zvinomera vatatu zononoka simbi nyere kugadzirwa mitsetse.
Kugadzira uye kupa simbi mutopota, nyere kukodzera flange
Tine vakavimba bhizimisi, kuverengwa yakarurama wechipfuwo kumusika, uye zvikuru yemakwikwi mitengo nekuda chemhando yepamusoro. Kupa vatengi ane yakazara zvakawanda unhu mabasa ndiyo panzvimbo yokutanga.
Mugadziri OF nyere Fittings AND Steel mutopota
Largest emakambani kuti dzidzira mukubudisa uye vachitengesa mapaipi simbi uye nenyere Fittings mu North China
Hebei Houdong Mapaipi Equipment Co., Ltd. iri mu yanshan kukura vematunhu, Hebei dunhu, "China Mapaipi midziyo mukugadzira chawo". The kambani ine vakanyorwa guta mamiriyoni 188 Currencykuva ndokwenguva nzvimbo 108 maeka. Kambani rakaumbwa muna 2008 uye "Hebei houdong Mapaipi midziyo Co., Ltd." rakavambwa muna 2017. The kambani zvino ine 160 vashandi uye anopfuura 30 nyanzvi uye michina personnel.Is dzakaunganidzwa simbi mutopota Fittings, ngura kuputira, Mapaipi Michina kukura uye kugadzira, Mapaipi nenhumbi kugadzira, Mapaipi nezvifambiso kuparadzirwa, zvipfuwo uye vatorwa vagotengeseranamo somumwe huru maindasitiri uye boka wezvokutengeserana kambani.
API 5L LSAW Steel Pipe kuti Oil Gas Water Transp ...
FBE Epoxy Powder ngura Pipe
309s / 310s Stainless Steel Pipe / chubhu
Welcome vatengi kuti kubvunza, tinogamuchira maawa 24 kubvunzana, nyanzvi kupa noushamwari uye kufunga zvinhu uye mabasa
38F, No 88, yincheng mugwagwa, pudong wedunhu mutsva, Shanghai, China
Hebei houdong Mapaipi midziyo co., Ltd.. riri mu yanshan kukura vematunhu, hebei dunhu, "China Mapaipi midziyo kugadzira hwaro"
304 316 Stainless Steel Pipe , 2 padiki Stainless Steel Pipe , Stainless Steel Pipe , Pipe Stainless Steel , Welded Stainless Steel Pipe, 316nb Pipe Stainless Steel ,